Layma's World: လွမ်းနေပါသည်.......M.I.T ( M.T.U)
လွမ်းနေပါသည်.......M.I.T ( M.T.U)
ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာ(၁)။ ။
“နေပူ လေတိုက် ....မြွေပွေးကိုက်သည်
လူမိုက် နေသည် .... M.I.T...”
ဘယ်ပညာရှိက စပ်ဆိုခဲ့လဲတော့ မသိဘူး....။ လေးမတို့ ရဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးကို အတိအကျ သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ စာချိုးလေးပါ ။ ပူလိုက်တဲ့နေ.....လေကတော့တိုက်ပါရဲ့.....လေပူကြီး.....ရန်ကုန်မှာတိုက်တဲ့လေက အေးတယ်.....မန္တလေးလေကပူပြီးခြောက်သွေ့ တယ်......။ ဒါတောင် ကျောင်းက တောင်ခြေမှာ ရှိနေပေလို့ပေါ့ ......။ တောင်တွေကလည်း အများကြီးဘဲ.....။ ရန်ကုန်သူဆိုတော့ တောင်တွေ မမြင်ဖူးဘူး........။ တောင်တွေဝန်းရံထားတဲ့ ကျောင်းကြီးမှာ မိသားစုနဲ့ခွဲပြီး ကျန်ခဲ့ရမယ့် လေးမကို မေမေက အားပေးပါတယ်.....“ မေမေသာဆိုရင်တော့ ဒီတောင်တွေကို ကြည့်ပြီးနေ့တိုင်း ငိုမှာဘဲ”တဲ့.......။ လေးမနေရတဲ့ အဆောင်က မန်းချယ်ရီ.....လေးမအခန်းက Front Row မှာ......နှစ်ယောက်နေရတယ်....။ အင်ဂျင်နီယာလောင်းတွေဆိုတော့ အခန်းဖော်က သင်္ချာဘယ်နှစ်မှတ်ရလဲ ဆိုတဲ့စကားနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်.......။ ၁၀၀ ဆိုတော့ ငါလည်း ၁၀၀ တဲ့.....ဒါဆိုတို့အခန်းက ၂၀၀ ပေါ့ဆိုပြီး ဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားကြတယ်.......။
အဆောင်ကကျောင်းဝန်းထဲမှာဆိုပေမယ့် စာသင်ဆောင်နဲ့ ဝေးတယ်...။ စက်ဘီးနဲ့ မှ အဆင်ပြေတယ်.....။
လေးမက တိုက်ခန်းပေါ်မှာဘဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့သူ ဆိုတော့ စက်ဘီးမစီးတတ်ဘူး......။ မေမေက စက်ဘီးတော့ ၀ယ်ပေးခဲ့တယ်...။ စက်ဘီးမစီးတတ်တော့ လမ်းလျှောက်ရတယ်......စာသင်ဆောင်နဲ့အဆောင်ကို သွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ ......ခြေထောက်တွေညောင်းပြီး ကိုက်လိုက်တာ.....။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ခေါ်ပါတယ်......ဒါပေမယ့် လေးမက စက်ဘီးပေါ် ခုန်မတက်တတ်တော့ လေးမထိုင်ပြီးမှ နင်းရတဲ့ သူငယ်ချင်းကို အားနာတယ်........။ ဒါနဲ့ ဘဲ လေးမစက်ဘီးစီး သင်တယ်.....။ လေးမရဲ့ ဆရာက လေးယောက် လောက်ရှိတယ်.....။ ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်ကလဲ အဆောင်ပေါ်မှာ အပြည့် အားပေးနေတယ်လေ........။ သူငယ်ချင်းက စက်ဘီးပေါ် ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ သူက နောက်က တွန်းတယ်....။ နင်း.....နင်း ဆိုတော့ အားရပါးရ နင်းလိုက်တာ သူငယ်ချင်းတောင် မလိုက်နိုင်တော့ဘူး.....အပေါ်ကပရိတ်သတ်ကလည်း အားပေးတယ်.......။ လေးမကတော့ချွေးတွေရွှဲ လို့ ....နင်းဆိုလို့သာနင်းရတာ လက်ကိုင်မှ မနိုင်တာ.....သစ်ပင်နဲ့တိုက်ပြီးလဲတော့တာပေါ့......ခြေထောက် အရွတ်ယောင်သွားလို့တပတ်လောက် နားလိုက်ရတယ်...........။ ။
Posted by Layma at 8:51 PM
MIT က ခုဘယ်မှာဖွင့်ထားပြီလဲ
June 2, 2007 at 9:38 AM
Hello brother Yan,
It is located at the foot of "yaetakon mountain".
Now it is only for Ph.D students...
I've finished my university5years ago..
Thanks for ur interest !!1
အခုဆို ရင် ဆိုင်ကယ်တောင် ရှောင်တတ် နေ လောက် ပြီ ။ စက်ဘီး စီးတတ်သွားပြီ ပေါ့ နော့ ။
အမရဲ့ ပို့တော်တော်များများကိုဖတ်သွားတယ်။ဂုဏ်ယူပါတယ်အမ။ မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလွမ်းနေလို့ MIT MTU ဆိုပြီးဂူဂယ်မှာရှာကြည့်တော့အမဘလော့ကို ကိုတွေ့ တာပါ။ယခုတော့ဖခင်ကျောင်းတော်ကြီးမှာတက်နေပါတယ်:P။